Oovimba beBTC- Iphepha 26 lama-28
Iinkunzi zeBitcoin ziba ndlongondlongo Ukulandela Ukwamkelwa kweZiko kwe-BTC
I-Bitcoin (i-BTC) kunye nayo yonke imakethi yemali ye-cryptocurrency izaliswe kukunyusa okukhulu kwiiyure ezingama-48 ezidlulileyo, kulandela ukufunyanwa okukhulu kwe-BTC yinkampani eyaziwayo yeenkonzo zezezimali, i-Square.
Uphuhliso lwakutsha nje luye lwabonwa ngabahlalutyi njengeyona nto iphambili kwiBitcoin, njengoko ukonyuka kokuthathwa komdibaniso kuya kuqinisa ngokubonakalayo ithemba lobuchwephesha kwi-cryptocurrency.
Oko kwathiwa, i-BTC isecicini lokucoca inqanaba lokumelana eliphambili elaziwa kakhulu ngokubangela ukuthengisa okunzima. Ukusilela ekucaciseni eli nqanaba kwakhona kunokubangela ukunganyaniseki okukhulu kwi-imali yedatha kwiintsuku nakwiiveki ezizayo.
Omnye umhlalutyi waphawula ukuba ubonelelo olukhoyo luyonyuswa ngabatyali mali abakhulu, uninzi lwamashishini ajonge ukufumana ukubonwa kwiBitcoin. Ucacisa ukuba le nto ingabamba abathengisi "ngaphandle kokugada" kwaye ibenze ukuba baxakeke ukuphinda bangene kwizikhundla zabo, eziza kuqhuba amaxabiso nangaphezulu.
Isikwere yinkampani yeenkonzo zezezimali eyibhiliyoni yeedola ekhokelwa ngumsunguli we-Twitter uJack Dorsey kwaye yenza iintloko izolo emva kokuthenga i-Bitcoin ezixabisa i-50 yezigidi zeedola ukuba ibanjwe kwiphepha labo lokugcina izinto njenge-asethi yokugcina.
Iindaba zilophule umzi mveliso kwaye zacebisa ukuba indlela engathandekiyo yeMicroStrikhi yokugcina imali iya isiba ngumkhwa. Nangona kungekho bungqina bokuxhasa eli nqaku, iinkampani zinokugcina isitokhwe kwi-BTC ngaphandle kokuba zibhengeze.
Amanqanaba aphambili eBTC okuBukela kwiXesha elikufutshane
I-Bitcoin iye yaxhaswa ngamandla emva kokuphuma kwinqanaba layo langaphambili. I-cryptocurrency iye yahlangatyezwa ngoxinzelelo olunzima kwindawo eyi- $ 11,150 njengoko kulindelwe. I-BTC inokubuyela kwindawo ethozamileyo kwindawo eyi-10,900 11,150 yeedola, apho inokufumana inkxaso ethe kratya, enokuyinceda iphumelele ukumelana ne- $ XNUMX yeedola kwaye isondele kwi-YTD ephezulu.
Okwangoku, i-bearish ye-Bitcoin iyinyani ekude enikwe amaxesha.
Imali iyonke yentengiso: $ 351.4 billion
Imali yentengiso yeBitcoin: $ 204 billion
Ulawulo lweBitcoin: 58%
I-Bitcoin iphulukana ne-Bullish Momentum elandelayo kwi-BitMEX Probe yi-CFTC kunye ne-FBI
Ukuhlaziywa: 2 October 2020
I-Bitcoin (i-BTC) iyaqhubeka nokusabela gwenxa kwiindaba ebezingalindelwanga izolo, emva kokuba i-United States Commodity and Futures Commission (CFTC) kunye ne-Federal Bureau of Investigation (FBI) zithathe amanyathelo asemthethweni ngokuchasene notshintshiselwano oluphezulu lweBitcoin, iBitMEX.
Malunga ne-18 yezigidigidi zeerandi irhoxisiwe kwimakethi ye-cryptocurrency yelizwe ukusukela oko iindaba zaqhekezayo, kwaye ngaphezulu kwezigidi ezingama-20 zeedola kwizikhundla ezinde kwi-BitMEX kuye kwarhoxiswa.
Ukwehla kuye kwaxhokonxwa luphuhliso lwamva nje kunye noMongameli uTrump, kulandela isibhengezo samva nje sokuba umongameli kuvavanyelwe isifo seCoronavirus.
Nangona kunjalo, i-cryptocurrency ebekiweyo ibeke umlo olungileyo kwaye ibambe umhlaba wayo ngaphezulu kwenqanaba le-10,000 yeedola, ngaphandle kwezinto ezininzi ezinamandla.
Ngokuzenzekelayo, ukwehla okuthe gca izolo bekumxhelo kunye nephethini ephezulu ye-bearish kwitshathi yethu yeeyure ezi-4, emva kokuba i-BTC isilele ukubanga ukumelana ne- $ 10,900 okwesibini kule veki.
Oku kukholelwa ukuba kuyangqinelana nemvakalelo ye-bearish kwintengiso, enokubangela ukuba kuthengiswe ngexhala. Nangona kunjalo, i-BTC ikwazile ukubamba ngaphezulu kwe-10,350 XNUMX yeedola yenkxaso, njengoko abathengisi ababuthathaka bekhutshelwa ngaphandle kwintengiso.
Ngexesha lokushicilela, i-Bitcoin ithengisa nge-10,530 yeedola, kunye neenkunzi zeenkomo eziphaphileyo ukukhusela le ndawo kwaye zibuyisele i-BTC kwindawo ye-pivot ye- $ 10,800-600.
Ukuba iinkunzi zeenkomo ziyasilela ukubamba ngokuqinileyo okwangoku, sinokubona ukukhawulezisa kwinkxaso ye- $ 10,000 kwakhona. Emva koko, iibhere ziya kuba nomdla wokuyithumela ukuvala isikhewu esingagcwaliswanga se-CME malunga ne- $ 9,660.
Imali iyonke yentengiso: $ 335 billion
Imali yentengiso yeBitcoin: $ 194 billion
Ulawulo lweBitcoin: 57.9%
Ingxelo yeCitibank yokuQikelela okuqinisekileyo kweBitcoin
Uluvo oluye lwaphoswa kutshanje kukuba iBitcoin (BTC) inokubetha unyaka omtsha (YTD) phezulu ngasemva kunyulo lukaMongameli wase-US.
Olu luvo luxhaswe ngumbono wempahla yekota wamva nje opapashwe yi-American behemoth, iCitigroup. Ifemi isekele uqikelelo lwayo kwigolide (XAU / USD) kunye nexabiso layo elinokubakho ngaphambi kwexesha lonyulo ngo-Novemba. Iqaqambise ukuba igolide inokurekhoda i-YTD ephezulu ngaphandle kokuphakama kwayo.
Ngeli xesha, iBitcoin, ekwabelane ngolwalamano olomeleleyo negolide ukusukela ngo-Matshi, iwile kule veki phakathi kwezinto ezifanayo ezopolitiko. I-cryptocurrency ebekiweyo ibambe i-10,100 XNUMX yeedola ngokufutshane kulandela isibhengezo sikaSihlalo weFederal Reserve uJerome Powell sokungakwazi kwebhanki ukuxhasa uqoqosho lwase-US xa ingekho iphakheji yesibini yeCoronavirus. Abahlalutyi abaninzi baye baxela kwangaphambili ukuba amanyathelo acetyiswayo anokungavunywa de kube semva konyulo.
Oku kulibaziseka kubangele ukuba abatyali mali abaninzi babaleke kwii-asethi ezikhuselekileyo njengegolide kunye neBitcoin, kwiDola yaseMelika (DXY). Kodwa kwiCitibank, eli xabiso ligolide kunye neBitcoin alizukuhlala.
Okwangoku, uTyler Winklevoss, umseki-ntsebenziswano wotshintshiselwano lweGemini, ucebise ukuba abantu mabahambe ixesha elide kwiBitcoin ukugcina imali yabo kwingxaki engenayo.
I-Bitcoin iyaqhubeka nokuthengisa phantsi kwemeko engenanjongo njengoko abatyali mali bejonge kulindelo. Ngokusekwe kwitshathi yethu yeeyure ezi-4, sinokubona ukuba i-BTC yenze iinzame ezithile kutshanje, kodwa ihlala iphikiswa ngamandla yindawo yethu ephambili kwiidola ezili-10,800 XNUMX kunye nokwehla okuxhaphakileyo.
I-BTC kufuneka yoyise zombini izikhombisi kwiswayipha esinye kwaye yaphule ngaphezulu kwe-10,800 11,200 yeedola ngaphambi kokuba kwenzeke kwakhona. Emva koko, inqanaba elilandelayo lokubetha kukumelana ne- $ XNUMX.
Imali iyonke yentengiso: $ 342 billion
Imali yentengiso yeBitcoin: $ 198 billion
Ulawulo lweBitcoin: 57.8%
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin-Septemba 15
Ukuhlaziywa: 15 Septemba 2020
Iinkunzi zeBitcoin (BTC) ziqhube kakuhle namhlanje njengoko zityhala i-cryptocurrency ekufuphi kwi-11k ekujoliswe kuyo kwaye yafuna ukuphuma kwidowntrend yakutshanje.
I-cryptocurrency ibonakala ixhamle kwi-bearishness yakutshanje kwi-dollar yase-US (DXY). Oku kuthumele igolide kunye neBitcoin, kunye neemarike zezabelo, zibhabha.
Intshukumo yanamhlanje, edityaniswe neyayizolo, iluncedo kwimbonakalo yexesha elikufutshane ye-cryptocurrency. Nangona kunjalo, kufanelekile ukuba ukhankanye ukuba i-BTC ayizukuqhekeka ngaphezulu kwe-11,000 yeedola ezichasayo.
Umhlalutyi ucacisile ukuba i-BTC ngoku ithengisa phantsi komgaqo ophambili wokuchasana nobuchwephesha kwaye impendulo yayo kweli nqanaba iya kuseka imeko yexesha elikufutshane.
Okwangoku, ezinye izinto ezisisiseko zisebenza ngokuchasene ne-BTC, kubandakanya ukufumanisa ukuba abathengisi abaninzi bathengisa i-BTC yabo ngelahleko kunenzuzo. Oku kunokuba luphawu lokuba abathengi abasandula ukuthengisa basebenzise le rally ukukhuphela ukubamba kwabo.
Abanye abahlalutyi banethemba lokuba i-BTC iya kuqhubeka nokukala ngaphezulu njengoko ubuchwephesha kunye nezinto ezisisiseko zibonisa ukuba ezinye iinzuzo zisondele.
Amanqanaba aphambili eBTC aBukele
Ngokusekwe kwimiboniso evela kwitshathi yethu, kuyacaca ukuba isenzo sexabiso le-BTC kutshanje sithambekele kwicala elingasentla.
Ngexesha lokushicilela, i-Bitcoin ithengisa nge-1.8% ngexabiso langoku le- $ 10,875, elona nqanaba liphezulu le-cryptocurrency ngaphezulu kweveki. Oku kuphawula ukunyuka okubalulekileyo ukusuka kwi- $ 9,880 yeedola zayo zamva nje, nangona kunjalo isekude ne- $ 12,400 ye-YTD ephezulu.
Umkhondo wokunyuka kulindeleke ukuba uxhase ngokuqinileyo i-Bitcoin ngokuchasene nayo nayiphi na into ekufutshane nayo. Kukho ukudibana kwezalathi (i-10,500 50 yeedola yokuxhasa, ukunyuka komkhondo, kunye ne-10,500 SMA) kwindawo yamaxabiso ayi- $ XNUMX, ucebisa ukuba ukwehla ngaphantsi kwelo nqanaba kunokuba yinto engenakwenzeka kwixesha elisondeleyo.
Imali iyonke yentengiso: $ 348 billion
Imali yentengiso yeBitcoin: $ 200 billion
Ulawulo lweBitcoin: 57.4%
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin-Septemba 13
Ukuhlaziywa: 13 Septemba 2020
I-Bitcoin (BTC) yehle kakhulu kwindawo eyi-10,300 XNUMX yeedola kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo, emva komzamo omfutshane wokuphuma kuluhlu lwangoku. Oku kwehla kukholelwa ekubeni sisicwangciso sempompo kunye nokulahlwa kweminenga ngeminenga kubarhwebi abancinci.
I-BTC ikhule ngaphezulu kwe- $ 120 kwiiyure ezimbalwa, ilandelwa kukudityaniswa okuthobekileyo ngaphambi kokuba iibhere zibangele ukulungiswa okubukhali, okubuyisele iBitcoin kwindawo yayo yamaxabiso.
Le yeyesibini "inkohliso" yedijithali yemali ebekiweyo kwinqanaba le-10,580 leedola, njengoko liqhubeka nokuthengisa ngaphakathi kwe- $ 10,500- $ 9,880 yokuhlanganisa uluhlu.
Ngaphambi kokuwa, iBitcoin yayithengise kakuhle ngaphezulu komgangatho oqinileyo wokunyuka. Nangona kunjalo, oku kwehlileyo kubangele ukuba ihambe ngaphantsi kwalo mkhwa, obexhasa i-cryptocurrency okwethutyana ngoku. Njengoko i-9 yezigidigidi zeedola ishiye imakethi yemali ye-cryptocurrency kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo, lo mgca ngoku uye waba kukuchasana neBitcoin ukuze kulwisane nayo kwithuba elikufutshane.
Ingingqi ephezulu- ye-10,500 yeedola ishiyeyona ndawo iphambili kwiinkunzi zeBitcoin eziza kuzaphula zibuyele kulawulo. Ukuba i-BTC iyaliphumelela elo nqanaba, sinokubona i-10,800 11,000 yeedola kunye ne-11 XNUMX yeedola kwakhona. Ikhefu eliyimpumelelo ngaphezulu kweempawu ze- $ XNUMXk liya kubuyisela isimilo sokuqala seBitcoin, esiya kuthi sincede i-cryptocurrency iphule irekhodi layo le-YTD.
Okwangoku, inkxaso ekhawulezileyo inokufumaneka kwi-50SMA ($ 10,262) elandelwa lilayini yengqondo eyi- $ 10,000. Ukuqhubela phambili ukwehla kwelo nqanaba kunokuzisa i-9,800-600 yeedola kwithuba elifutshane.
Ukuza kuthi ga ngoku, i-BTC ikwazile ukuvala ikhandlela elingaphantsi kwenqanaba leedola ezili-10k. Ukuba oku kuyenzeka kufutshane nekota, nangona kunjalo, kunokubangela ukuba iinkunzi ziphulukane nokuzithemba kwaye zibangele ukuthengiswa okunamandla.
Imali iyonke yentengiso: $ 337 billion
Imali yentengiso yeBitcoin: $ 190 billion
I-Bitcoin Dominance: 56.3%
I-Bitcoin ngokunokwenzeka ukuba i-Tumble kwikota elisondeleyo njenge-Volatility Fade
Ukuhlaziywa: 11 Septemba 2020
I-Bitcoin (BTC) isekelwe kwi-Jemani. I-cryptocurrency yehla yaya kwinqanaba eliphezulu le- $ 9,000 emva kokuba irekhode i-YTD entsha ejikeleze i-12,400 yeedola kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo.
Ngokungaqhelekanga, oku kunika ukuqonda okuncinci okanye kungabikho kwaphela kumbono wexesha elikufutshane le-BTC, nangona ibonakalisile ukuba zinamandla kangakanani iibhere ngoku.
Omnye umhlalutyi uqaphele ukuba ubheja ngokuchasene neBitcoin, njengoko elindele ukuba imali yedatha ifikelele kwisikhewu se- $ 9,600 se-CME. Ucacisa ukoyiswa izolo kwizinga le- $ 10,500 njengophawu lobuthathaka obutsha. Nangona kunjalo, ubambe ukuba ikhefu elilungileyo ngaphezulu komgca weedola ezili-10,500 XNUMX linokuphinda libuyekeze ixesha elifutshane le-BTC.
Okwangoku, isenzo sexabiso sakutshanje esijikeleze iBitcoin sinefuthe elibonakalayo kwityala labatyali mali, njengoko idatha ibonisa ukuba imeko yentengiso iyonke ihlala ishukuxekile ngabarhwebi abaninzi abathembele kwi-bearish kwithemba elikufutshane le-cryptocurrency.
Oko kwathethi, ukudibana kwezalathi zobuchwephesha kunye nokuchasana okuthembekeleyo phakathi kwabatyali mali kunokubangela ukwehla okubukhali kwemali ebekiweyo.
I-Bitcoin ithengise kuluhlu oluhlanganisiweyo phakathi kwe- $ 10,500 kunye ne- $ 9,900 ngaphezulu kweeseshoni ezisixhenxe zilandelelana. Inqanaba eliphambili lokuphuka lihlala kwindawo eyi- $ 10,500 pivot, elandelwa yi- $ 10,800, kunye ne- $ 11,000 yengqondo yengqondo.
Kwiphepha le-flip, iibhere kufuneka ziphule ngaphantsi kwe-9,900 9,600 yeedola inkxaso ngaphambi kokuba zithathe i-BTC kwi-XNUMX ye-CME gap. Isaphulelo esomeleleyo kulindeleke ukuba senzeke ukuba iBitcoin ekugqibeleni iwele kuloo nqanaba.
Imali iyonke yentengiso: $ 334 billion
Ulawulo lweBitcoin: 56.8%
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin-Septemba 9
Ukuhlaziywa: 9 Septemba 2020
I-Bitcoin (i-BTC) ngoku ichithe phantse iintsuku ezisixhenxe ilwa ne-10,000, XNUMX yeedola, njengoko iinkunzi zeenkomo ziyaqhubeka nokubamba loo layini kwaye zithintele nakuphi na ukwehla okukhulu.
Akukacaci ukuba loluphi ulwazelelo olunokwenzeka kungekudala, kodwa kujongeka ngathi iinkunzi ziyaphumelela ngaphandle kokunyamezeleka kwe-BTC.
Abarhwebi be-Crypto bahlala besithi xa i-bitcoin iphuka ngaphezulu koxinzelelo olubalulekileyo, kunqabile ukuba ithengise ngaphantsi kwelo nqanaba kwakhona. Ukunikezelwa kokusebenza kweBitcoin kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, kuyabonakala ukuba kunjalo ngoku.
Ngaphandle kwemizamo eliqela yokwaphula ngaphantsi kwenqanaba lamanani ama-5, ukuthengisa kuye kwasilela ukukhusela ukuvala okungaphantsi kwelo nqanaba. Endaweni yokuba ishiye umtya wentsimbi ngasemva kwaye ezi ntambo ziqala ukufutshane zibonisa ukuba iibhere ziyadinwa.
Ngomso, ikhandlela lesixhenxe lemihla ngemihla liya kube seligqityiwe. Ukuba eli khandlela ligcina isikhundla salo ngaphezulu kweempawu ze- $ 10k, i-spike eqinileyo enokuqhubeka emva koko.
Ngeli xesha, kule minyaka ilishumi idlulileyo, uSeptemba ubambe igama lokuba yinyanga ebomvu ye-cryptocurrency yokubekisa. Oko kwathiwa, kuya kuba lunomdla ukubona indlela izinto ezidlala ngayo ngeBitcoin kwixesha elikufutshane.
Itshathi ye-BTCUSD yeeyure ezi-4
I-Bitcoin ihlala ivaliwe kwisitishi esincinci phakathi kwe- $ 10,345 kunye ne- $ 9,880. Ngenxa yobuthathaka beebhere, sinokubona iBTC inyuka ngokukhawuleza kungekudala. I-Bitcoin inokuphula uluvo lwe-bearish ukuba iphinda ibuyele kwindawo eyi- $ 10,500-800 yeepivot, enokuthi iqhubele phambili ukuqhubela phambili.
Kwiphepha le-flip, ikhefu kwaye uvale ngezantsi kwe- $ 10k uphawu zonke iibhere kufuneka zithathe i-Bitcoin kufutshane ne-9,600 ye-CME gap.
Imali iyonke yentengiso: $ 332.8 billion
Imali yentengiso yeBitcoin: $ 189 billion
Ulawulo lweBitcoin: 56.9%
Iminenga ibambelele kwi-Bitcoin ngaphandle kobuthathaka bamva nje
Ixabiso leBitcoin (BTC) lihla kakhulu kuba imakethi iyakoyikisa ukuphindaphinda into eyoyikekayo 'emnyama ngoLwesine.' Nangona kunjalo, kuthathelwa ingqalelo ubungakanani beminenga oyifumene i-BTC ngaphezulu kweenyanga, ukuphindaphinda kweso siganeko akunakulindeleka.
Okwangoku, kuhlala kungacaci ukuba yintoni unobangela wokuhamba ngesiquphe. Ngaba kungenxa yokufunyanwa kwe-BTC ngabantu abazizityebi njengothango ngokuchasene nokungaziwayo?
Kunokuthiwa oku akunakulindeleka ukuba kubenjalo ngenxa yokungazinzi okugqithisileyo kwemali ye-imali yedatha. I-asethi ekwazi ukuphazamiseka ngaphezulu kwe- $ 2,000 phantsi kweeyure ezingama-48 ngokuqinisekileyo ayisiyiyo uthango oluhle ngokuchasene nokungaqiniseki.
Akumangalisi ukuba kutheni abatyali mali bamashishini behleka ingxoxo yokuba iBitcoin yayiyinto enxamnye nokudibanisa ukubiyela ipotifoliyo.
Okwangoku, ingxelo ibuye yaphinda yaya kwixabiso lentengo kunye nokusebenziseka kwe-BTC njengothango ngokuchasene nokwehla kwedola yaseMelika (DXY). Kwakhona, i-cryptocurrency ebonakaliswa ngumgangatho ibonakala inonxibelelwano olusondeleyo negolide (i-XAU / USD), eyindawo ekhuselekileyo yokubalekela abatyali mali. Ngaphandle kokuba luthango olulungileyo xa kuthelekiswa nedola, igolide ifumana isibheno sayo esikhuselekileyo ngokunika abatyali zimali ubunini babucala ngaphezulu kwempahla yorhwebo engafikeleleki kurhulumente.
I-Bitcoin ilunge ngakumbi kule meko inikwe indalo yayo yedijithali. Kungenxa yoko le nto iminenga iya kuqhubeka nokuyisebenzisa njengothango ngokuchasene nantoni na.
U-Bitcoin uchithe uninzi lomhla wakhe esilwa nenkxaso eyomeleleyo yeedola ezili-10,000 10,500 njengoko abarhwebi behleli ecaleni phakathi kokungaqiniseki okukhulu. I-cryptocurrency yaphule ngaphantsi kwenkxaso-encinci-ngamaxesha amaninzi emini kodwa yahlangatyezwa ngokukhawuleza ngenkxaso efanelekileyo. Eli nqanaba lokudibanisa linyamezele malunga neentsuku ezine ngoku phakathi komda weedola ezili-9,880 XNUMX kunye nenkxaso ye- $ XNUMX.
Oko kwathethi, kubonakala ngathi iinkunzi zeenkomo ziqala ukudinwa njengeebhere zigcina ukuqaqanjelwa kwesithuba se- $ 9,600 ye-CME.
Imali iyonke yentengiso: $ 322 billion
Imali yentengiso yeBitcoin: $ 185 billion
Ukuhlala kweBitcoin kuvalelwe edabini kunye ne-10,000 yeedola
Ukuhlaziywa: 7 Septemba 2020
I-Bitcoin (BTC) ihlala kumzabalazo wayo wokuhlala ngaphezulu kwenqanaba elinemivo emi-5 kodwa kubonakala ngathi iyasilela emfazweni njengoko iye yaphuka ngaphantsi kwelo nqanaba amatyeli aliqela kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo.
Ekuqaleni kosuku, i-Bitcoin ibonakalise ubuthathaka obukhulu njengoko iibhere zayithumela isezantsi njenge- $ 9,880 apho yenze khona isaphulelo esibukhali kwinqanaba le-10,200 leedola. Kubonakala ngathi ibambekile kweli nqanaba njengoko iinkunzi zeenkomo ziqhubeka nokulwa noxinzelelo olwandayo lokuthengisa.
Nangona kunjalo, omnye umhlalutyi ukholelwa ukuba iBitcoin isenokuqhubeka nokunyusa umgangatho nangona inobuthathaka obuqhubekayo. Umhlalutyi uphawula ukuba oku kwehla kukufumana nje okuthobekileyo ukubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Ukuze kwenzeke oku kuqikelelweyo, iBitcoin kufuneka ibambe ngaphezulu komgca we-10,000 yeerandi. Ukusilela ukwenza njalo kunokubonisa ukubhujiswa kweenkunzi zeenkomo kwithuba elikufutshane.
Ngexesha lokushicilela, i-Bitcoin ithengisa nge-0.67% ngosuku kwi- $ 10,190. Oku kukhwela ngokuthobekileyo ukusuka kumhla wayo ophantsi kwi-9,880 yeedola kunye namanqaku aliqela ngezantsi kwayo yonke imihla kwi-10,312, XNUMX yeedola.
Idiphu yanamhlanje yathengwa ngokuqatha ziinkunzi kwi-9,880 yeedola yenkxaso, ukuyithumela kwakhona ngaphezulu kwe- $ 10k. Oku kwenza ukuba le nkxaso ibaluleke kakhulu kwaye inokwenzeka ukukhusela okokugqibela kwe-BTC kwi-9,600 yeedola ze-CME.
Nangona kunjalo, xa unikwe iimeko zangoku zeemarike, kubonakala ngathi isithuba seCME sinokugcwaliswa kungekudala. Kwiiyure ezingama-24 zokugqibela, ngaphezulu kwe- $ 15 yezigidigidi ishiye imarike ye-cryptocurrency ebonisa ukuthengisa okuqhubekayo.
Oko kwathethi, umsantsa wokuzaliswa kungekudala unokukhulula imali yedijithali kwaye uyithumele kwakhona ngaphezulu kweendawo zayo eziphezulu ze-YTD.
Okwangoku, onke amehlo akwi- $ 10,000 njengoko ukusabela kweBitcoin kweli nqanaba kwiiyure ezizayo kuya kunceda i-benchmark crypto iphinde ibuyele uzinzo.
Imali iyonke yentengiso: $ 328 billion
Imali yentengiso yeBitcoin: $ 188 billion
Ulawulo lweBitcoin: 57.3%
I-Bitcoin "Ukulwa Nobomi" Ngaphezulu kwe- $ 10,000
Ukuhlaziywa: 6 Septemba 2020
Kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo, iBitcoin (BTC) ibhabha phezulu ngaphezulu kwamanqaku ayi-12,000. Ukukhawulezisa phambili ukuza kuthi ga ngoku kwaye i-cryptocurrency ebhentshini iyasokola ukuvala ikhandlela lanamhlanje ngaphezulu kwe-10,000 yeedola zenkxaso.
Yonke le nto ihlasele iBitcoin xa iimarike zezabelo zaseMelika zithathe ibango elinamandla, zibangela ukubonelelwa okungaphezulu kwemali ye-cryptocurrency. Okwangoku, eyona ngxaki iphambili ye-BTC yeza xa umyili we-SUSHI (i-asethi eyaziwayo ye-DeFi), uChef Nomi, ethengisa iindawo ezinkulu azibambayo. Oku kubangele ukuthengiswa kweempahla zeDeFi, i-Ethereum, kwaye ekugqibeleni, iBitcoin.
Kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo, i-BTC ifikelele kwinqanaba layo eliphantsi ukusukela nge-26 kaJulayi (i-9,878 XNUMX yeedola).
Elona nqanaba libalulekileyo lokujonga apha linqaku le- $ 10,000. I-BTC inokufumana ukuphumla kwexesha elifutshane ukuba iphelisa usuku olungaphezulu kweli nqanaba. Ukuba iBitcoin ilahlekelwa kukubamba kwale ndawo, sinokubona i-9,800 yeedola, kwaye emva koko isithuba esizi-9,600 se-CME.
Kwicala elisezantsi, kunokubakho ulungiso olomeleleyo oluvela kweli nqanaba, elinokuthumela i-cryptocurrency yokuqala ukubuyela kwi- $ 10,500- $ 10,800 kwingingqi yeepivot kwaye kamva kwinqanaba le-11,000 leedola. Emva koko, ummandla we-11,200 - 11,650 uza kuphinda udlale kwakhona.
Okwangoku, ngokwezibonakaliso ezivela kwi-MACD yethu kwitshathi yeeyure ezi-4, i-BTC iphakathi kwemeko ezigqithileyo ngoku kwaye isaphulelo esomeleleyo ngoku siphunga, sinika ukuthembela ngakumbi ekubuyiseleni ixesha elikufutshane iBitcoin.
Ukulungiswa kwale veki kuza nomthamo omkhulu, orekhodwe njengowona uphakamileyo kwiintsuku ezingama-30 ezidlulileyo. Oko kwathethi, kuyavakala kuphela ukuba ulungiso oluphezulu kufuneka lulindelwe. I-Bitcoin iya kuphinda ikhuthaze kwakhona ukuba iwela uphawu lwe- $ 11,000.
Iyonke Intloko yentengiso: $ 325.9 billion
Intloko yeBitcoin yeNtengiso: $ 188 billion
Isalathiso se-BTC Dominance: 57.8%
← Entsha izithuba 1 ... 25 26 27 28 abaDala izithuba →